प्रदेश न. ५ - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रदेश न. ५ - www.khabardabali.com
चैत ३१ गते, २०७७ - १५:४२
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा ४२ वर्षीय चक्र बहादुर पक्राउ
बाँके । आफ्नै ३२ वर्षीया श्रीमती लक्ष्मी बिसीको कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा बैजनाथ गाउँपालिका–३ उत्तरलधौरा बस्ने ४२ वर्षीय चक्र बहादुर बुढालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चक्र बहादुरले घरायसी...
चैत ३० गते, २०७७ - १४:४६
रुपन्देही । बुटवलमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गतको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत रुपन्देही, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका एक–एक जना सङ्क्रमितको मृत्यु...
चैत २६ गते, २०७७ - १३:४२
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा ६६ वर्षीय बानिया पक्राउ
रुपन्देही । आफ्नै श्रीमती ५५ वर्षीया कुसुम बानियाको हत्या गरेको अभियोगमा सियारी गाउँपालिका–३ हर्नैयागाँउ बस्ने ६६ वर्षीय गनपत बानियालाई बिहीबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गनपतले आफ्नै श्रीमतीको हत्या...
कञ्चनपुर । विभिन्न मुद्दाका फरार नौ प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको छ । एक साताको अवधिमा प्रहरीले नौ प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये केहीलाई कञ्चनपुर जिल्ला...
चैत २५ गते, २०७७ - १६:०२
पोखरीमा डुबेर ३५ वर्षीय चौधरीको मृत्यु
रुपन्देही । सुद्धोधन गाउँपालिका–५ पुरेनी बस्ने ३५ वर्षीय दुहे चौधरीको सोही गाउँपालिका–२ तल्लो खैरेनीस्थित पोखरीमा डुबेर मंगलबार साँझ मृत्यु भएको छ । माछा मार्ने क्रममा पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएको भन्ने खबर प्राप्त...
चैत २५ गते, २०७७ - १२:४१
झिमरुक । प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–३ रजवारामा एक गोठमा आगलागी हुँदा दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान करीब ९ बजे स्थानीय रमेश रानाको गोठमा आगलागी हुँदा उनको सात वर्षीय छोरा हिमाल राना र तीन वर्षीय छोरी...
चैत २५ गते, २०७७ - ०९:५२
कञ्चनपुर । वायु प्रदूषणका कारण कञ्चनपुरका बासिन्दामा आँखा पोल्ने, चिलाउनेलगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ । स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा अधिकांश बिरामी आँखाकै समस्या लिएर पुग्न थालेका छन् । झलारीस्थित स्वास्थ्यचौकीका...
चैत २४ गते, २०७७ - १०:४०
गए राति पाल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
पाल्पा । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–७ काजीपौवास्थित भित्री कच्ची सडकखण्डमा कुखुरा बोक्ने पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । गए राति करिब साढे १२ बजे लु२च ६३२ नंको पिकअप जीप कुखरा ल्याउँदै गर्दा...
चैत २३ गते, २०७७ - १०:५६
पाटेबाघको आक्रमणबाट हात्ती चराउँदै गरेका माहुतेको मृत्यु
बाँके । बर्दियामा आइतबार एक जनाको हात्ती चराउँदै गरेका माहुतेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटेबाघको आक्रमणबाट परेर मृत्यु भएको छ । घाँस काट्ने क्रममा बाघको आक्रमणमा परी हात्तीसारका कर्मचारी ३१ वर्षीय माहुते...
चैत २३ गते, २०७७ - १०:४३
कञ्चनपुर । बेदकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको कार्यले गति लिन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख बिरुवाको नम्बरिङ, छपान, मूल्याङ्कन, इआइएको भेरिफाइ गर्नेसम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्ने भएको...